Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanavaozana miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny fiainana taloha sy ny fahaiza-miaina: ny tantaram-piainana taloha momba ny pharmacist Brussels | Blanche Courtain - Fikarohana Reincarnation
Trangam-panjakan'olo-tokana miaraka amin'ny fitadidiana ny fiainana ara-jeografika taloha sy ny fahaizan'ny saina: tantaram-piainana taloha momba ny mpivarotra fanafody Brussels | Blanche Courtain
Fomba fiaina: Fahatsiarovana tamin'ny fahazazany
Mpikaroka: P. Courtian
Avy amin'i: Le Messager de Liege sy Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, nataon'i Ian Stevenson
Article amin'ny Walter Semkiw, MD
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: ny zanakavavin'ny mekanika amin'ny lalamby dia mahatsiaro ny fiainany taloha ho toy ny mpivarotra fanafody
P. Courtain dia mpanamboatra alalana ho an'ny lalamby fanjakana ao Belgique. Ny zanany vavy, Blanche, dia nahatsiaro tampoka nandritra ny androm-piainany taloha izay nahitany fivarotam-panafody tao Bruxelles, 40 kilometatra na 25 kilaometatra lavitra ny toerana nipetrahan'ny fianakaviana tao amin'ny tanàna Charleroi.
Ity tranga ity dia navoaka voalohany tao amin'ny gazety ara-panahy, Le Messager de Liege, tao amin'ny 1911. Ian Stevenson tatỳ aoriana dia nampidiriny tao amin'ny bokiny, Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao.
Fahaiza-manao ara-tsaina an'i Blanche momba ny fahazazana
Tamin'ny dimy taona i Blanche no naneho ny fanehoana fanairana, satria izy dia namaritra mazava tsara ny renibeny sy ny renibeny, izay efa maty 15 taona talohan'ny nahaterahan'i Blanche. Ny ray aman-dreniny dia tsy nahalala na inona na inona momba ny fanairana na ny spiritisma ary niahiahy izy ireo fa manana aretina saina i Blanche.
Araka izany dia nentin'izy ireo tany amin'ny dokotera nanoratra fanafody izy, izay, miaraka amin'ny fitsidihan'ny dokotera, dia mitentina 7.5 Francs. Ny ampitson'io dia nandà tsy handray ny fanafody i Blanche, nanazava tamin'ny ray aman-dreniny fa nisy olona teo akaikiny, toa nanondro fanahy iray, nilaza taminy fa ho sitrana izy raha tsy eo io.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: Blanche no nanome ny adiresy ny Pharmacy tany Bruxelles
Ankoatr'izay dia nilaza izy fa fantany izay tokony horaisiny, satria efa mpanamboatra fivarotana izy. Gaga ny ray aman-dreniny tamin'ity fanambarana ity. Blanche avy eo dia nilaza hoe:
"Mpivarotra farmasia tany Bruxelles aho." Nomeny ny ray aman-dreniny avy eo ny adiresin'ny fivarotam-panafody, miaraka amin'ny anaran'ny arabe sy ny isany. “Raha tsy mino ahy ianao dia mandehana mijery ny tenanao. Mbola misy fivarotam-panafody ao ary fotsy tanteraka ny varavaran'ny toerana. ” (1)
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-boalohany: Nitarika ny rahavaviny tany amin'ny Pharmacy ny fiainany i Blanche
Roa taona taty aoriana dia nieritreritra ny handeha ho any Bruxelles ny zokim-pirenen'i Blanche, sary an-kavanana, ary nanoro hevitra ny ray aman-dreniny fa hiaraka aminy i Blanche. Blanche avy eo dia nilaza hoe:
"Eny. Handeha aho hitondra ny rahavaviko any amin'ny toerana nolazaiko taminao. ” (2)
Nanohitra ny ray aman-dreniny hoe: "Saingy tsy fantatrao i Bruxelles." Namaly i Blanche hoe:
"Tsy misy fahasamihafana izany. Indray mandeha any aho dia hampiseho ny rahavaviko amin'ny lalana. (3)
Ireo zatovovavy dia nanao ny dia ary tao amin'ny làlambolan'ny gara Brussel, nanohitra ny anabaviny
"Ampahafantaro ahy ny lalana." (4)
Namaly i Blanche: "Marina izany. Eo moa. Izany no fomba. "Avy eo dia nitondra ny rahavaviny teo am-pandehanana i Blanche. Hoy i Blanche, rehefa afaka kelikely:
"Ity no lalana." Jereo! Misy ny trano ary hitanao fa fivarotam-panafody izany. "(5)
Ian Stevenson dia mamaritra ny zava-misy:
"Nahagaga ny rahavaviny fa nilaza ny zavatra rehetra i Blanche-ny làlana, ny isa ary ny loko-ny varavarana-dia araka izay notantarain'i Blanche. Tsy misy ny tsipiriany. "(6)
Fahatsiarovana jeografika: Ny tanjak'ity tranga ity dia miankina amin'ny fahaizan'i Blanche hahalala ny tena adiresin'ny fivarotam-panafody any Bruxelles, avy eo hahita izany amin'ny diany voalohany tany Bruxelles. Azafady azafady fa ity tranga ity dia navoaka voalohany tamin'ny 1911, ela be talohan'ny nahalalana mora foana ity karazana fampahalalana ity, toy ny tamin'ny Internet.
Ny fahaizan'i Blanche mahita ny fivarotam-panafody dia mampatsiahy ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha momba ny vatana vaovao, izay azon'i Barbro nitarika ny ray aman-dreniny tany amin'ny Anne Frank House tamin'ny diany voalohany tany Amsterdam.
Ny Fanahy Mitarika: Afaka namariparitra mazava tsara ny renibeny sy ny renibeny, izay maty nandritra ny folo taona talohan'ny nahaterahan'i Blanche i Blanche.
fanamarihana ambany pejy